Fabricdị akwa akwa na-ejikarị usoro asatọ, ghota! - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Fabricdị akwa akwa na-ejikarị usoro asatọ, ghota!
m. StiffnessTụ akwa ahụ ka ịwefụ isi ike, mmeghachi omume nke onye mmegide, echiche nke ịgbado oke na juju. Ọmụmaatụ, aka nke akwa di elu nke eji akwa eriri na yarns mee. Iji mee ka akwa ahụ sie ike, ekwesịrị ịhọrọ eriri dị mma, enwekwukwa modul nke akwara, Ekwesịrị imeziwanye eriri yarn na ncha akwa.
2. SoftnessSoftness na-ezo aka mgbanwe, ìhè arọ, siri ike, na-amị amị amị na -emekwa ụda, isi ike, ịkwụ ọtọ na ịre ure. Akwa ahụ nwere mmetụta dị nro, nwere ike melite ogo yarn ọfụma, họrọ sọks ndị ọzọ dị mma, ịkpa akwa enweghị ike ịdị oke.
3. fullnessFabric N'ụbọchị nke ọma, nye ndi mmadu inwe obi uto na iruju. Mkpakọ na-akwụghachi nke ọma, na-enye ndi mmadu obi uto na okpomoku.
4.Mmejuputa nrụrụ nke arụ so na anụ ahụ dị.
5. Nro nwayọIhe na-esite n'at ụ na ọnya siri ike ma ọ bụ akwa nwere akụkụ gbagọrọ agbagọ bụ ọkachasị mmetụta nke akwa ahụ., nke na-eme ka akwa ahụ dịkwuo elu. Enwere ike ị nweta nwayọ site na ịgbanye ma jiri eriri na akwa ma ọ bụ na-agbachaghị agbacha.
6. Degree na-eme ka ihe dị mma na ajị anụ ahụ dị mma, dị ka cashmere. Na-emegide ogo nke ịre, ọ chọrọ ka ekpori elu nke akwa dị mma ma kesaa ya n’elu akwa dịka ụdị curls ma ọ bụ ábụbà.. A na-ejikọ ogo ogo ya na-agbada agbada.
7. Ngwurugwu flatnessFabric drape na akụrụngwa na-agbatị onwe ha na-enweghị nhịahụ. Enwere ike ịmepụta agwa dị otú a site na ịhọrọ eriri na yarn iji melite ogo ihe.
8. Dia. Ọ bụrụ na akwa nwere ike droop na-eji ire ụtọ, edo edo curvature ma ọ bụ ọbụna ripple elu, a na-ekwu na akwa ahụ nwere ezigbo drape.
Biko gosi mmalite nke "web textique" mgbe ị na-edegharị ederede nke weebụsaịtị a.
Nri abalị na ndị ahịa